Na-ewebata Atụmatụ na Learningmụta banyere Igwefoto Igwe - OMG Solutions
Na-ewebata meskpụrụ na Learningmụta banyere igwefoto-Worn Camera
Ngosiputa nke igwefoto ndi mmadu n’aru nso nso enweela ihe banyere idebe iwu, ihe a ga - eme ka odiwanye karia ka otutu ulo oru tinye igwe a. Ekwesighi itinye mkpebi nke ịrụ ọrụ igwefoto eji eyi ọfụma. Ozugbo ụlọ ọrụ na-agbadata n'ụzọ nke iwebata kamera ndị nwere uwe ma otu ọhaneze abịa na-atụ anya na enwere ndekọ vidiyo. Ọ ga - abụ ihe siri ike inwe echiche nke abụọ ma ọ bụ imeghachite ihe omume igwefoto eyi. Ngalaba ndị uwe ojii na-akpụrụ kamera eyi, na-ekwupụta na ya kwenyere n'ihe ndị uwe ojii mere. Site n’iche ihe ịma aka na mmefu nke ịzụta na mmejuputa sistemu igwe igwe eji arụ ọrụ, imepe iwu, na ịzụ ndị isi ya maka otu esi eji igwefoto, ngalaba na-emepụta atụmanya ezi uche na ndị otu na ndị mgbasa ozi ga-achọ ịtụle. omume nke ndi oru. Ma enwere ụfọdụ ihe mmachi doro anya akwụkwọ a ga-atụle, ihe nkiri eserese igwefoto ga-eme ka ọha na eze wee rịọ ọ bụghị naanị maka vidiyo ndị a bụ ndekọ ọha kama ọ bụ na ime nke a na-enyere ngalaba ndị uwe ojii aka igosipụta nghọta na mmeghe. mmekorita ya na ndi obodo.
N’afọ gara aga, Executivelọ Ọrụ Nchọpụta Ndị Uwe Ojii (PERF), tinyere nkwado site na Ngalaba Na-ahụ Maka Ikpe Ziri Ezi na United States nke Orilọ Ọrụ Na-ahụ Maka Iwu Ndị Ọha na Obodo (COPS Office), mere nchọpụta banyere iji kamera ndị a na-eyi eyi n’ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. PERF gbara ajụjụ ọnụ karịa ndị isi ndị uwe ojii 40 nwere ahụmịhe nwere kamera na-eyiri ahụ, tụlee ihe karịrị atumatu igwefoto efe efe 20 nke ndị ọrụ uwe ojii nyefere, ma kwado ogbako otu ụbọchị na Washington, DC, ebe ihe karịrị ndị isi ndị uwe ojii 200, ndị ọka iwu , ndị ọkà mmụta, ndị ọrụ ikpe na-ahụ maka ikpe ziri ezi nke gọọmenti etiti, na ndị ọkachamara ndị ọzọ jiri kamera ndị a na-eyi n’ahụ́ tụlee ahụmahụ ha.
Ndị ọrụ mmanye iwu na-eji igwefoto ahụ na-eyi n’uzo dị iche iche: iji melite mkpokọta ihe akaebe, iji mee ka onye ọrụ na-arụ ọrụ na ịza ajụjụ, iji mee ka ndị uwe ojii mara nghọta, ka ịdepụta mbubata dị n'etiti ndị uwe ojii na ọha, yana nyochaa ma dozie mkpesa na ihe ndị uwe ojii metụtara.
Agencylọ ọrụ mmanye iwu ọ bụla dị iche, ihe na-arụ ọrụ n'otu ngalaba nwere ike ọ gaghị ekwe omume na ngalaba ọzọ. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịhụ na ọ dị mkpa imeghari ndụmọdụ ndị a ka ha kwekọọ na mkpa nke onwe ha, mmefu ego na enweghị ọrụ, iwu iwu steeti, na ụzọ usoro ọgụgụ isi banyere okwu nzuzo na ndị uwe ojii.
Mgbe ị na-etolite atumatu igwe mmadụ nwere uwe, PERF na-atụ aro ka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kpọtụrụ ndị ọrụ nchekwa, ndị ọrụ mpaghara, ndị ọka iwu mpaghara, ndị ọka iwu, ndị otu mpaghara, ndị ọzọ metụtara mpaghara, na ọha na eze. Nweta iwebata ihe site na otu ndị a ga - eme ka amata iwu nke igwefoto ahụ nwere akụkụ ahụ, ọ ga - emekwa ka usoro mmemme ahụ gaa nke ọma maka ụlọ ọrụ na - ebugharị igwefoto ndị a.
Iwu ntanetị ga-ekwupụta nke ọrụ ekenye ma ọ bụ nye ya ohere iyi kamera ahụ nwere ya yana ọnọdụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ na-ekenye ndị ọrụ uwe ojii n ’ọrụ afọ ofufo, atumatu kwesịrị igosipụta ọnọdụ akọwapụtara ọ bụla enwere ike ịchọrọ onye uwe ojii otu.
Ndị ụlọ ọrụ na-ekwenyeghị ka ndị ọrụ jiri kamera nwere onwe ha mgbe ha nọ ọrụ.
Iwu ntanetị ga-ekwuputa ọnọdụ ekwenti nke ekwesịrị eyi.
Ndị ọrụ uwe ojii nke na-arụ ọrụ igwefoto eyi ahụ mgbe ọ na-arụ ọrụ kwesịrị ka a rịba ama ịdị adị na ndekọ na mkpesa mmeme ahụ mere.
Ndị ọrụ uwe nke na-eyi kamera nwere eyi ga-adị mkpa ka ha kpoo igwefoto ma ọ bụ dee ederede ha ma ọ bụrụ na ha edekọghị ọrụ iwu achọrọ ka edekọ.
Ihe ndi amuru banyere ihe nzuzo
Igwefoto eji ahụ mmadụ nwere ihe dị mkpa metụtara ikike nzuzo nke ọha, ọkachasị mgbe a na-edekọ ajụjụ ọnụ nke onye ọ bụla metụtara ya, ịgba ọtọ, yana isiokwu ndị ọzọ na-emetụ n'ahụ yana mgbe ọ na-edekọ n'ime ụlọ ndị mmadụ. Ndị ụlọ ọrụ ga-etinye echiche nzuzo ndị a n'ime mkpebi gbasara mgbe aga - edekọ, ebe na ogologo oge ịchekwa data, yana otu esi azaghachi arịrịọ ndị mmadụ na-arịọ maka eserese vidiyo.
Mgbe achọrọ ndị ọrụ iji mee ka igwefoto ha rụọ ọrụ, usoro a na -emekarị bụ na-achọ ndị uweojii ka ịdekọ oku niile maka ọrụ na mmemme metụtara iwu na imebi igwefoto naanị na mmechi ma ọ bụ nkwado onye nlekọta.
Ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe mejupụtara mmemme iwu metụtara ma ọ bụ ihe omume na iwu igwefoto nwere uwe na-eyi uwe. Ọ dịkwa uru ịnye ndepụta nke ọrụ ụfọdụ akọwapụtara gụnyere, na-achọpụta na ndepụta ahụ abụchaghị ihe niile. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ndị ọrụ ndụmọdụ n'ozuzu ha na mgbe ha nwere obi abụọ, ha kwesịrị idekọ.
Iji kpuchido nchekwa ndị uwe ojii ma kweta na ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume na ọnọdụ ọ bụla, ọ bara uru ịkọpụta n'ụkpụrụ iwu na ndekọ agaghị achọ ndekọ ma ọ bụrụ na ọ gaghị adị nchebe, agaghị ekwe omume, ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ.
Nchegbu nzuzo dị oke mkpa nwere ike ibilite mgbe a na-agba ajụjụ ọnụ maka ndị omempụ, karịsịa n'ọnọdụ metụtara ndina n'ike, mmetọ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere nsogbu. Agenciesfọdụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ inye ndị uwe ojii ndụmọdụ banyere ma ha idekọ n'ọnọdụ ndị a. N'ụdị ndị a, ndị uwe ojii kwesịrị iburu n'uche uru ihe ndekọ a bara na njikere ọ dị maka ikwu okwu na igwefoto. Agenciesfọdụ ụlọ ọrụ na-agagharị n'ihu wee chọọ ndị uwe ojii iji nweta nkwenye nke onye ahụ metụtara tupu edekọ ajụjụ ọnụ ahụ.
Iji kwalite mmezi onye uweojii, imirikiti atumatu chọrọ ndị ọrụ ka odee dọkụmentị, igwefoto ma ọ bụ na-ede ede, ihe kpatara onye ọrụ uwe ojii ahụ ji mebi igwefoto n'ọnọdụ ndị achọrọ ka edekọ ya.
Mgbe ị na-eme mkpebi gbasara ebe ị ga-echekwa ihe osise igwe eji etinye igwe onyonyo, ogologo oge ọ ga-edebe ya, na otu ekwesịrị igosipụta ya ọha na eze, ọ ga-adị mma ka ụlọ ọrụ gakwuru ndị ndụmọdụ gbasara iwu na ndị ọka iwu.
Iji nyere aka kpuchido ikike nzuzo, ọ kachasị mma ịtọlite ​​oge mkpụmkpụ maka data na-enweghị ihe ọ bụla. Oge njigide kachasị na vidiyo a bụ n'etiti ụbọchị 60 na 90.
Ihe omumu mutara banyere otu esi enwe mmekorita obodo
Ndị ụlọ ọrụ achọpụtala na ọ bara uru isoro ndị ọha na eze, ndị na-atụpụta iwu obodo, na ndị ọzọ metụtara ya na-ekwurịta okwu
Banyere ihe igwefoto a ga-eji maka ya na otu igwefoto ga-esi emetụta ha.
Ndị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ bụ ụzọ dị irè iji mee ka njikọ ọha na eze rụọ ọrụ.
Chọ ndị ọrụ idekọ oku maka ọrụ na mmemme mmanye iwu karịa mkparịta ụka ọ bụla na ọha nwere ike hụ na a naghị amanye ndị uwe ojii ka ha dee ụdị mkparịta ụka nkịtị nke bụ ihe dị mkpa maka iwulite mmekọrịta na-enweghị atụ n'etiti obodo.
Ordingdekọ ihe ndị mere na ebe mpụ dị ndụ nwere ike inyere ndị uwe ojii aka ijide nkọwa na ngosipụta nke nwere ike ịba uru na nyocha ma ọ bụ ndị ikpe mechara.
Itinye obodo aka tupu imejuputa ihe omume igwefoto nwere ike inye aka n’inweta nkwado maka ihe mmemme a ma nwekwuo echiche ziri ezi na mmemme ahụ n’obodo.
Chọ ndị ọrụ ka ha depụta ya, ma ọ bụ igwe onyonyo ma ọ bụ na-ede, ihe kpatara ha jiri gbanyụọ igwefoto n'ọnọdụ ọ bụla achọrọ ka hadekọ na-eme ka onye uweojii mara ọrụ.
Ihe omumu mutara banyere ime ihe banyere nsogbu onye isi
Dị ka ọ dị na mbubata ọzọ nke teknụzụ, mmemme, ma ọ bụ atụmatụ ọ bụla ọzọ, ụzọ kacha mma gụnyere mgbalị ndị isi ụlọ ọrụ na-esonye na-etinye ndị isi n'okwu ahụ, ịkọwapụta ebumnuche na uru nke mbido a, wee lebara ndị ọrụ nche ọ bụla nwere ike inwe.
Nkwupụta, ịkpọ oku, na nzukọ ndị nnọchi anya otu ụzọ dị mma isi kpọtụrụ ozi gbasara mmemme igwefoto eyi.
Teammepụta otu mmejuputa iwu nke gụnyere ndị nnọchi anya si n'ofe ngalaba ahụ nwere ike inye aka mee ka usoro mmemme dị mfe yana mmejupụta dị mfe.
Igwefoto ndị nwere anụ ahụ nwere ike ịbụ ngwa ọrụ nkuzi mgbe ndị nlekọta na-elebanye anya na ndị isi na-ele fim anya ma na-enye nzaghachi na-ewuli elu.
Agencylọ ọrụ ahụ ga-ejigide ogologo oge ndekọ data ga-anọ n'ọnọdụ dị iche iche.
Usoro na iwu maka ịnweta na inyocha data e dere ede, gụnyere ndị enyere ikike ịnweta data yana ọnọdụ enwere ike nyochagharịa data ahụ.
Ntuziaka maka iwepụta data edepụtara n'ihu ọha, gụnyere usoro iwu metụtara mgbakwunye na azịza arịrịọ ngosi nke ọha.
Na nchịkọta, iwu ga-agbasobere iwu na ụkpụrụ niile dị adị, gụnyere ndị na-achịkwa mkpokọta njikwa na njigide, ngosipụta ozi ọha na nkwenye. Atumatu kwesiri ibu ihe doro anya iji nye ndi isi agha ntuziaka doro anya ma dikwa agbanwe agbanwe. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịme ka usoro ndị ahụ dị maka ọha na eze, ọkacha mma site na biputere amụma ndị ahụ na weebụsaịtị ha.
Mgbe etinyere ya n'ọrụ n'ụzọ ziri ezi, igwefoto ahụ nwere eyi nwere ike inye aka mee ka ọrụ ndị uwe ojii sie ike. Igwefoto ndị a nwere ike inye aka kwalite mmezi nke ụlọ ọrụ na ịkọwapụta ya, ha nwere ike ịbụ ngwaọrụ bara uru maka ịbawanye ọrụ ndị uwe ojii, imezi ọzụzụ ndị uwe ojii, ichekwa ihe akaebe, na ịdekọ ihe gbasara ọha na eze. Agbanyeghị, ha na-ekwupụta okwu dị ka ihe bara uru yana na ọkwa amụma, ụlọ ọrụ abụọ a ga-eji nlezianya nyochaa. Agencieslọ ọrụ ndị uwe ojii ga-ekpebi ihe ịnara kamera nwere eyi ga-apụta na njikọ nke ndị uwe ojii - ime obodo, nzuzo, ntụkwasị obi na usoro nke ndị uwe ojii.
Ndị ụlọ ọrụ uwe ojii kwesịrị ịgbaso usoro eji eme ihe maka mmejuputa mmemme igwefoto eyi. Nke a pụtara ịnwale igwefoto na mmemme ndị ọkwọ ụgbọ elu yana ndị ọrụ nche obodo na ndị obodo mgbe mmejuputa ya. Ọ pụtakwara na iji atụmatụ igwefoto eji arụ ọrụ kpuchie uwe na-eme ka ndị mmadụ ghara ịza ajụjụ, ịkọwapụta ya na ikike nzuzo yana ichekwa mmekọrịta ndị dị mkpa dị n'etiti ndị isi na ndị otu obodo.
policeforum.com. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Technology/implementing%20a%20body-worn%20camera%20program.pdf
Nzuzo 7516 1 Echiche Taa